प्रकाशित मितिः कार्तिक 28, 2077
जगदिशप्रसाद कुसियैत २०५१ सालको निर्वाचनमा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग झिनो मतान्तरले पराजित हुनुभएको थियो । पछि भएको उपनिर्वाचनमा भने उहाँले भारी मतले चुनाव जित्नुभएको थियो । त्यसबेला कांग्रेसको किल्लाको रुपमा रहेको उक्त क्षेत्रमा चुनाव जितेर उहाँ देशभरी चर्चित हुनुभएको थियो ।
अहिले उहाँ एक नं. प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको रुपमा रहनुभएको छ । उहाँसँग औजारन्युज डटकमको टिमले गरेको कुराकानीको अंशः
यहाँको मन्त्रालय ४ वटा कसरी सम्हालिरहनु भएको छ ?
मन्त्रालयमा सबै कुराको व्यवस्थापन भइरहेको छ । मन्त्रालय अनुसारकै कर्मचारीको व्यवस्था छ । मेरो मन्त्रालयमा अहिले राज्यमन्त्री समेत थपिनुभएको छ । उहाँले पनि केही काम सम्हाल्नुभएको हुँदा मलाई काम गर्न गाह्रो छैन ।
राज्यमन्त्रीलाई कस्तो जिम्मेवारी दिनुभएको छ ?
राज्यमन्त्रीलाई विशेष गरी उद्योगको क्षेत्र हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ । हाम्रो सल्लाहमा नै सबै काम भइरहेको छ । उहाँले मेरो अन्य काममा पनि साथ दिइरहनु भएको छ । त्यसैले गर्दा मन्त्रालयको काम सहज रुपमा चलिरहेको छ ।
एउटै मन्त्रालयमा किन यति धेरै जिम्मेवारी ?
संघियता आएपछि प्रदेश सरकारको संरचना नै यस्तै भएकोले बढी जिम्मेवारी एकै ठाउँमा भएको जस्तो देखिएको छ । फेरी मुलुकका सातै प्रदलेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एउटै छ । जिम्मेवारी लिने मान्छे नभएर वा राख्न नसकेर भन्ने कुरा होइन । त्यति मात्र होइन आपूर्ती, वाणिज्य, विज्ञान तथा प्रविधि गरी ७ निकाय यही मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ ।
आजको दिनसम्म तपाईको मन्त्रालयले के कस्तो काम अगाडी बढाइरहेको छ ?
सुरुमा हामीले २०७४ को अन्तिम तिर प्रान्तिय सरकार बनाइसकेपछि त्यसबेला कार्यालय संरचनामा नै हाम्रो ध्यान केन्द्रीत भयो । त्यस पश्चात हामीले ल्याएको पूर्ण बजेटबाट करिब ४ अर्ब बजेट यो मन्त्रालयकालागी छुट्याइएको थियो । हामीले पर्यटनको पूर्वाधार विकास, वनका कामहरु लगायत अघि बढाएका छौं ।
अहिलेसम्म यहाँले गर्नुभएको राम्रो कामहरु बताइदिनुहोस् न ।
पर्यटकिय क्षेत्र अन्तर्गत धेरै भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण ग¥यौ । मठ मन्दिर, गुम्बाहरु निर्माण ग¥यौ । फुट ट्रयाकहरु निर्माण ग¥यौ । वनको क्षेत्रमा धेरै काठ उत्पादन समेत गरेका छौं । वैज्ञानिक वन व्यवस्थानका कामहरु समेत गरेका छौं । माउण्टेन फ्लाइटको सुरुवात ग¥यौ । जुन सफल कार्यक्रम हो । माउण्टेन फ्लाइटकालागी ४ महिना अघिदेखि बुकिङ हुने गथ्र्याे तर कोरोनाका कारण यो अहिले बन्द छ । भिजिट नेपाल २०२० ले कोशिटप्पुदेखि सन्दकपुरम्मका पर्यटकिय क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै थियौ ।
२ सय वैज्ञानिकलाई एक नं. प्रदेशमा भेला गरायौ । जुन भेलाले विज्ञान तथा प्रविधिका माध्यमबाट गर्न सकिने काम, यसको भविष्य, अहिलेको आवश्यकता जस्ता कुराहरुका बारेमा छलफल र निष्कर्ष समेत निकाल्यौ ।
एक गाउँ एक उद्योगको कार्यक्रम कहाँ पुग्यो ?
एक गाउँ एक उद्योग सबै जिल्लाका पालिकाहरुमा सुरु गरिसकेका छौं । यसको प्रभावकारी नतिजा देखाउनकालागी बजेट अभाव छ । यसवर्ष बजेट लगाएर देखिने गरी काम गर्छाै । त्यस्तै धनकुटामा औद्योगिक ग्रामको लागी ५० औं करोड बजेटबाट काम भइरहेको छ ।
यहाँले पर्यटन कार्यालय स्थापना गर्नुभएको छ, यसले के फाइदा पुग्छ ?
सबैभन्दा पहिला त यो बुझ्नु प¥यो कि हाम्रो प्रदेशमा पहिला काकडभिट्टा र सोलुको नाम्चेमा पर्यटन कार्यालय थियो । अब धरानमा भएको पर्यटन कार्यालयले पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायहरु होटल, रेष्टुरेण्ट, होमस्टे लगायतको नविकरण र दर्ता हुन्छ । पर्यटनका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न सुचिकृत गर्नेदेखि लिएर डिपिआर र निर्माणसम्मका काम त्यहीबाट हुन्छ ।
कोरोना महामारीका बेला प्रदेशको आपूर्तीको जिम्मेवारी पाउनु भएको थियो, कसरी काम गर्नुभयो ?
महामारीका बेला मात्र होइन अहिले पनि आपूर्तीको जिम्मेवारी यही मन्त्रालयको हो । महामारीका बेला कुनै स्थानमा खाद्यान्नको अभाव हुन्छ कि भन्नेकुरामा हामी जिम्मेवार थियौ र छौ । प्रदेशका कुनै पनि ग्रामिण इलाकामा केही कुराको अभाव भएन । हामीलाई कहीबाट पनि यो वस्तुको अभाव भयो भनेर जानकारीसम्म आएन । त्यसैले गर्दा प्रदेशमा आपूर्तीमा समस्या नै छैन ।
कोरोना महामारीका बेला यहाँले २ करोडको बिलासी गाडी चढ्नुभयो भने आलोचित हुनुभयो, के बिलासी नै हुनुभएको हो त ?
गलत, हामीले कोरोना महामारी आउनु भन्दा पहिला नै गाडी खरिदको प्रकृया अघि बढेको थियो । संयोगवस कोरोना महामारीका बेला गाडी आइपुगेको मात्रै हो । गाडी किन महंगो भन्ने कुरामा चाही एक नं. प्रदेश पहाडी तथा हिमाली भूभाग छन् । सो ग्रामिण स्थानमा पुग्न सक्ने अफरोड एक्सप्रेस गाडी भएकोले अलि महंगो पर्न गएको हो ।
जनताले त सुविधाभोगीको रुपमा बुझे नि ?
ठिक हो, हामी सुविधा भोगी हुनु पनि हुँदैन । हिजो हामी सामान्य नागरिक थियौ । आज पदमा छौ र भोली फेरी उही स्थानमा फर्किने हो । त्यसैले जनभावना विपरित जानुहुँदैन, विलासी हुनुहुँदैन । म यो कुरामा संवेदनशिल छु । मेरो दैनिकी बिलासी छैन ।
तपाई त नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पार्टी फुट्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
म त पार्टी फुट्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दिन । मलाई जहाँसम्म लाग्छ पार्टी कुनै हालतमा फुट्दैन । दुई अध्यक्षबीचको केही असमझदारी देखिएको छ तर त्यो पार्टी फुटिहाल्ने तहमा पुगेको देखिदैन । पाटी फुटेर कसैलाई पनि फाइदा नहुने भएकोले पनि पाटी फुट्दैन ।
तपाई सुनसरीको शिर्ष नेता पाटी सुनसरीमा नराम्ररी पराजित भयो किन ?
पाटीको यस क्षेत्रमा नेतृत्व गर्नेले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । नेतृत्व गर्ने प्रमुखले उम्मेद्वार छनौट गर्दा गरेको गल्तिका कारण नै सुनसरीमा पराजय भोग्नु प¥यो । १२ वटा स्थानीय तह मध्ये हामीले ३ वटामा मात्रै जित्यौ । यसको प्रमुख कारण भनेको नेतृत्वको मूलप्रवाहमा बस्नेले सहकार्य, समन्व नगरेका कारण नै हो ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले गणतन्त्रमाथि हमला गर�
‘बार्सिलोनाकाे क्यारियरमा मेसीको पहिलो रातो कार्ड’
आज मिति २०७७ माघ ५ गते, साेमवारको राशिफल
चिसो बढेसँगै उपमहानगरले दाउरा बितरण सुरु गर्यो
निर्वाचनका लागी धनकुटामा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन